Ifindo Karmic: izimpawu. Indlela ukuqaqa amafindo karmic?
Kugcila ezinkulu ukunakwa bengqondo, esoteric, Izanusi waqala ifindo karmic e ezizokwehlela abantu.
Ngakho professional mystics ucingo ayikwazi axazulula izinkinga, usizi eziyinkimbinkimbi, kunzima ukuthola okukhiphayo zazo.
"Nodes" liphazamisane umphefumulo aguquka futhi ufunde izingqimba entsha ngokoqobo.
Bona zivuse imizwelo enamandla yokucasukela endaweni "isisulu", futhi uma ukuphatha kwabo "umchilo", ukuphila kuba ujabule kakhulu futhi wanelisa.
Ukuze ukuvela kwezinkinga ezingathi sína kunezizathu ezinhle
Izinkinga eziningi thina ukuxazulula kalula futhi ngokushesha, niqonda kubo njengenjwayelo nohlu lokufanele ukwenze izinto. Kodwa umuntu ngamunye ngokuvamile has inkinga okungenani eyodwa enkulu, leyo ayibheka njengento nzima futhi Ezingalapheki.
Lokhu kungaba ukubukeka nenyanyekayo, ukugula, ngokungaqondi ebuhlotsheni nabantu abaseduze, ukwehluleka ukwenza imali nenani oyifunayo, ukwesaba, umuzwa 'yokuntula impumelelo ".
izimo ezinjalo eyinkimbinkimbi negative ukuthatha umuntu oluningi kakhulu amandla yangaphakathi. Kubonakala sengathi ukuze unqobe nazo badinga omunye: ukushintsha indlela yokucabanga noma ukuba ayeke izinzuzo sezivele ingamboziwe.
Ababhula ngezinkanyezi futhi esotericism ngokuthi izinkinga ezinjalo "ifindo karmic." "Esimnandi" izimo zokuphila, ngokusho kongoti kumafilosofi Eastern, wathumela kithi kwaphezulu njengoba "izifundo ukudalelwa."
Uma isimo ngokombono kwababukele abangeyona bheka nzima, kodwa iqembu okuyilona elikhulu Akawukhululi nemizwelo emibi, akuyona ifindo karmic.
Ngokwesibonelo, e ukuxoshwa emsebenzini umuntu, mhlawumbe engamboziwe okuthile okukhethekile uma ebona lesi sehlakalo ngokuphepha, futhi uyayijabulela nokuyijabulela inkululeko oluseBhayibhelini ayesanda kuluthola.
Kanjani ukuba siqonde ukuthi "loop" Kwalandela?
Uma ezigqagqene-okuyinto engathandeki, nifuna ukusivumela, sinikeza asemrarweni, sinake izimpawu Node karmic:
Zokufinyelela lowo mgomo wayefisa ekuvimbeleni izimo "esiphoqayo". Une kakhulu isikhathi, umzamo imali, abantu noma ezinye izinsiza okuningi ukuze udlulele iphupho.
Ngezinye izigaba zobudala obuhlukene nobunzima efanayo. Wena ngokuphindaphindiwe ukuze akhohlise, nikela, ukuphika umthombo engenayo noma wamangalela.
Enhliziyweni yakhe kusukela ebuntwaneni umuzwa, ekuthumeleni ukungakhululeki eqinile. Lokhu kungaba ukungeneliseki ngokuphila, nomuzwa wokungabi usizo lwalutho noma "ezingadingekile." Ngezinye izikhathi "nightmare siqu" enjalo ithola nomuzwa wokuthi abantu abakuzungezile uyidelele, thola isiwula noma cha athathwe ngokungathi sína.
ubudlelwane Kunzima ukuthuthukisa nomuntu oxoxa abakwazi ukushiya. Kungenzeka izingxabano unresolvable nabazali, izingane, futhi engxenyeni yesibili.
Imisebenzi kusuka ekuphileni kwabo kwangaphambili
Ezweni entshonalanga, "umthetho karma," futhi, ngenxa yalokho, "nodes", banesithakazelo ngenxa imihlola. Njengalezi nefilosofi Eastern endleleni enhle abheka ngayo babevela yokuthi abantu baphile izimpilo eziningi, owawusekelwe ngemva kokufa e indikimba entsha isikhathi ngasinye.
Ingena isimo ukuwozela ka-trance, abaholi abangokomoya wabukela incarnation lokugcina yakhe "iziguli."
Ngemva kulezi zifundo, abantu abaphendukela nababhuli, waqonda izinkinga zabo futhi imizwa engakhi ehambisana nabo, kwakukhona akukhona nje ukuqondana kwezinto ukuthi izimo ezinzima zinikezwa ngenjongo ukucabangisisa umsebenzi izimbungulu.
"Losers" Abaningi yenza ngokuphelelwa yithemba, wacela usizo a hypnotherapist, manje ngithatheleni isipiliyoni kuhambeke incarnations odlule.
izinselele yamanje zisiza ukushintsha izinkolelo eziyiphutha
Ochwepheshe bona ifindo karmic. Indlela zithukululeni, abizele isiphetho ukunikela umuntu abanye indlela yokubhekana nayo.
Abanye abantu bakhathazekile kakhulu ngezinkinga yansukuzonke kufanisa sekuphelile ifindo karmic ukuba athole injongo yokuphila. Ngokuvamile, abenzi amaphutha.
Esikhathini ukuhlaziya isiphetho imigqa ngempela zokuthi umphefumulo Ngeza kuleli zwe nge umgomo oqondile: ukuthola indlela ukusika ifindo karmic, sikwenze. '
amadoda nabesifazane abaningi abaphendukela a hypnotherapist, kubonakala sengathi kwezinye incarnations base enobudlova ngokweqile, wabulala noma baboshwa abantu, ukweba, nayo imizwa enamandla intukuthelo, nomona noma isikhwele.
Bakhumbule nemicabango kanye nemizwelo sokuphila isikhathi eside, baqaphela ukuthi izinkinga zamanje - sibi "nisebenzela" esidlule ukuphila amaphutha.
Uma kuseyinkinga kungalungiswanga ebuhlotsheni nabanye imiphefumulo, ngakho ngeke ukhathele intukuthelo futhi bangabethembi.
Kulesi simo, uyoba sibonane ne "nengangibajwayele elidala" kule impilo, zifezeke "izikweletu ezindala" okungukuthi, ukuqonda kanye nokuthethelelana.
kanjani izifundo zokuphila?
Ukuze "ukubuyisela" isiphetho noma karma Ungakhetha amathuluzi angajwayelekile:
Mirror ukushintsha isisulu futhi kumuntu osonile izindima.
Ukuphinda nesimo esinzima, nge ushintsho imininingwane.
Yenza izimo ezintsha lapho imiphefumulo engqubuzanayo ngeke sibonane, kodwa kuyodingeka abhekane nesimiso "isiqhingi" imizwa efanayo, njengoba e incarnations odlule.
Ukushintsha imithetho yalo mdlalo, isiphetho kuyosishintsha ukuqonda entsha ngokoqobo, ukuthola ukuthi ngeke kwenzeke ukuba baphindaphinde 'izono ubudala. "
Lena iyona ncazelo omuhle ukudalelwa izifundo. Umuntu evivinywa, umphefumulo wakhe uba msulwa neliphelele kunalelo.
Nokho, i-Karma futhi karmic ifindo, ungeyena kokubonwa umlandu namkha isigwebo. Man njengoba esingokomoya yena kudala umsebenzi wakhe siqu phetho nemizwelo.
"Phuma" kungcono kancane kancane
Ukuze siqonde umnyombo sezinkinga zabo, abantu uyazibuza kanjani ukugqashula ifindo karmic. Ukuze kufezwe lokho, bephendukela Izanusi izangoma. Bafuna ushintsho ngokushesha.
Ochwepheshe ujwayelene imfundiso yokuziphendukela karma, is hhayi Kunconywa ukuba aphuthume ibe ndaba ebucayi kangaka, njengoba umsebenzi ekushintsheni ikusasa labo siqu.
Kukhona umuntu enze imicikilisho yokushiswa ne ukukhanyisa amakhandlela, amakhadi, ingilazi amabhola, ngenxa okuyinto kukhona impambano okusheshayo ifindo karmic. Nokho, umphumela omuhle isinyathelo imilingo kuyashesha, futhi le ndoda abaphendukela ubuthakathi, esiletha izinkathazo ezengeziwe.
ISIZINDA Karmic kudingeka ufunde futhi "uhlala khona." Kuphela ke kuzokuqinisa.
Kanjani ukuqonda "isimo eziyinkimbinkimbi" ngokuya zokusebenza kwengqondo?
Ukukhulula ifindo karmic - into ngokuphila "ukuba-do uhlu."
Uma mayelana isifiso evamile kukhohlakale, umphefumulo yenkinga ukukhumbuza ngokwabo, okubangela imizwa ebuhlungu kokwesaba, umuzwa wecala, akhathazeke, akhungatheke.
Uma le esaphila akwanele ukushintsha isimo sengqondo isimo kutfola izinkolelo eziyiphutha, nokufunda kuyaqhubeka esikhathini incarnations elandelayo.
Ngokombono bengqondo ukutadisha imithetho inhlanhla zonke inkinga, okuphindayo ikakhulukazi, udinga ukubheka kokubili isifundo ingakamiswa wafunda.
Ukuze unqobe izithiyo kubalulekile ukushintsha isimo sengqondo kuya nobunzima: funda ukubala "wokugoma kusukela okubi kakhulu" yabo noma "amabutho of Isiphelo 'ezemfundo ikhono lakho lokuba namahlaya.
Ngempela, amasu amaningi ngokwengqondo ngayo nefunda ngayo kukhona ngabodwa ifindo karmic zihlanganisa kwenaba nesimo.
"Simoron" Shono kukhona ethandwa kangaka yobuciko wesimanje umlingo. Ingqikithi magic zitholwe abaningi, liyoveza izenzo ezihlukahlukene kungazwakali, ngolwazi ukuthi "kolduete" inkinga. Simorontsy 'ngena akunjalo, "nokudansa ezitaladini," ziyahamba "ngeketanga" hang izingubo "ngokwebala emabhasini.
Lezi imidlalo zikuvumela ukubaleka ezimbi ezabehlela zanqwabelana, ukushintshela negagasi injabulo futhi wenze "eqa besikhathi okungcono-umbukwane."
izindlela Soft ukuba kancane kancane uphume esimweni esinzima
Uma ecabanga ukuthi ukuhlanza ifindo karmic ngokuphephile, sinake izindlela ezilandelayo:
Abantu abakwaziyo ukuba ngisale imizuzu embalwa, ukuyeka okumatasa, kuba lula ukubhekana nokukhumbula inhlokomo zokuphila futhi sifinyelele imigomo yakho ngokushesha. Epholile, ukuzindla ucabangisisa - kuyiholide hhayi kuphela, kodwa futhi kuyisinyathelo sokuqala sokululama ukhipha ifindo karmic.
Hlala phansi endaweni enofonofo, uphumule imizuzu engu-15, gxila kuphela ukuphefumula. Noma yimuphi omunye imicabango "wokudela" njengoba exhale.
Embusweni nokuzindla, umzimba nomphefumulo kukhona amandla okukhulu. Phuma kusukela nesimo esinzima lula futhi ngokushesha.
2. Isicelo sibhekiswe Amandla Ephakeme.
Kuwo wonke inkolo into yenkolelo iba koMuntu Ophakeme, obusa izwe, lapho umuntu angasebenza ukwesekwa, ukuvikelwa noma isidalwa ukunethezeka ethize.
Cela ngezindlela ezihlukahlukene. Ngokusho imithetho yebandla, kumelwe uthandaze.
Esikhathini sokubuyekeza esoteric kuya Amandla Ephakeme kungaba ngesimo ngeso izenzakalo oyifunayo, ekukhiqizeni ngamanani amancane ikhadi ufisa ukuphindaphinda ezitatimende omuhle.
Ngo "Simoron" isicelo inqubo ngezenzo aluhlaza cwe.
Uma thina ukugxambukela ifindo karmic, indlela zithukululeni, uphakamisa inkolo. Indlela enjabulweni, ngokuvumelana Sages, cha bophezela izenzo ngokungafanele, kodwa kunalokho ukulawula ingqondo nemizwelo yakho.
Kubalulekile ukuba sizole, hhayi umona, hhayi ukwahlulela, hhayi ukuze akhaphele ukubaluleka ngokweqile yimuphi izinto zasemhlabeni.
Ukubhekana ifindo karmic, kubalulekile ukuqonda ezingeni yabo ukuhileleka isimo ngenhloso ukuzisola. Kudingeka ukuqonda lokho owakwenza okungalungile futhi kwaholela emiphumeleni emibi.
Ngokuvamile, it is ukuphenduka kusiza ukuphula umjikelezo omubi.
Ukuze imichilo ifindo karmic, kubalulekile ukuthatha wena kanye nabanye ababambiqhaza e isimo njengoba benjalo.
Uyakukuthuka ukubaluleka izahlulelo incazelo ezimbi: akukho muntu omunye akakwazi ngokuthi uyisiwula, alithandeki, ukuvilapha, kancane.
A Izindonga zeJerikho zawa umphefumulo - ukuba baqonde ukuthi wanikwa iqoqo izimfanelo engcono ukuya indlela yokuphila.
Ukuze wamukele ngempela wena nabanye, ungasebenzisa umkhuba angokomoya, njengezintombi "Ukudla intethelelo."
Nsuku zonke, bhala imisho 50: "Mina Proschan ... ngoba ...". Ngesonto lokuqala udinga ukuthethelela ngokwakho, landela - abazali, abangane bomshado, izingane, izihlobo nabangane akude.
Ukudla okunjalo ngokwengqondo kuyasiza ukuvimba ukugeleza bokuqiniseka maqondana ngokwabo kanye nabanye.
beneme futhi isifiso sokuthutha ukuthi "Ngiyabonga!" Umkhathi, abantu, isimo samanje futhi wena ngokuvamile kwenzeka ngokwemvelo, uma uphatha ukuthethelela esidlule futhi ukuyiyekela ihambe ngokuthula.
amandla Ephakeme ngakho wayesiza umchilo node karmic uma ukubonga kubo nganoma yiluphi usizo.
Engqondweni ukuphimisela igama elithi "ngiyabonga", thina sigxila ebuhleni okungukuthi isimo samanje, kungani, bese uqaphela ezinye izinto ezinhle.
6. Ikhanga abeluleki.
Ulwazi lwabo, ubuchwepheshe, izisetshenziswa zingahle ngokwanele ukuba aphume umjikelezo omubi. Zilungiselele ukucela usizo ngokomoya othisha-abeluleki.
Leli gunya kungenzeka yomoya olethembayo, abefundisi, izazi zokusebenza kwengqondo, abaqeqeshi ibhizinisi, coaching noma kwabantu abahlakaniphile asebekhulile ukuphila nakho.
Zicabange i ngengqondo 'umeluleki. " Lokhu kungaba umuntu odumile noma ibhizinisi abstract. Kufanele siqiniseke ukuthi lo muntu uyazi kahle izimpendulo ukukhathazeka kwakho.
Nokho okubi - ngaphandle nesithukuthezi
Enye kokuphazamisa imibuzo eminingi: indlela ukusika ifindo karmic othandana naye?
Kaningi, indoda nowesifazane futhi bakhangane, "ngomyalo wabaholi isiphetho," kodwa ubuhlobo babo akubukeki njenge yothando inganekwane. imiphefumulo amabili nakho Luhambo komunye nomunye bese kudingeka ukuba zibe ndawonye, kodwa ubudlelwane bayatfutfuka eziyinkimbinkimbi futhi abakhulule imizwelo engakhi ezingaphezu kuka omuhle.
Ngo ubudlelwane ezinjalo angekho edingekayo ezinye "izithako" okukodwa noma ngaphezulu ukuxhumana ujabule: ukuqonda, ithemba kanye nokuvumelana ezindabeni ezinkulu ezintweni ezivamile.
kuyindaba yomuntu siqu
Indlela umchilo karmic uthando ifindo? Ngamanye amazwi, indlela yokwenza ubuhlobo Engxenyeni yesibili abachuma noma wayeka, yadedela injabulo nomunye owesilisa noma owesifazane?
Karma kuhlanganisa izikweletu komuntu yena, akakho izibopho kwabanye abantu, kuhlanganise namalungu omkhaya, akukwazi. Nokho, abantu beze kuzo zonke izinhlobo zobuhlobo ukwenza imisebenzi yabo karmic.
Ngokwesibonelo, uma injongo umphefumulo e incarnation wamanje - sifunde ukuthethelela, ukhanda ngeke ngokuphindaphindiwe push it ntu de abadinga ukuba "bavunwe" futhi wamukela zinjalo.
ifindo Karmic emkhatsini wemadvodza kanye nebafati kwenzeka uma imiphefumulo ezimbili zingene ebuhlotsheni obuseduze inhloso zifezeke izikweletu ubudala.
Ukudalelwa esihlanganisa ubulili imibhangqwana okuphambene hhayi ngendlela engahleliwe, futhi ukushintsha futhi sibe abaphelele ngokomoya. Man uthola unkosikazi ukubhubhisa kwakhe "idealization."
Uma, ukwenza isibonelo, i-yowesifazane ukubaluleka kubaluleke kakhulu njenge "ikhaya impilo enokuthula", umyeni wakhe, nge awokuthi, kuyoba nendoda ukwakha 'sokuthula' asinakuba nobuhlobo.
Ukuze umchilo karmic uthando ifindo, kubalulekile zidlule izigaba eziningana:
Qonda ukuthi akukho imithetho iyunifomu yokuziphatha. Omunye umuntu angase abe nelungelo uholwe imicabango kanye nezimiso, obuhlukile kobakho.
Bona nokungapheleli kwabantu yabo leyabanye - wonke umuntu unelungelo lokwenza amaphutha.
Siyaqaphela ukuthi uma senza wahlulela omunye umuntu, khona-ke ezifaka esimweni lapho siyaphoqeleka ukuba baziphathe naleyo sisuke ubukela phansi.
Vulela i "ifindo" engxenyeni yesibili futhi kusiza isikhalazo ukuze emandleni aphakeme, ukuba abafundisi, ukuzindla, ukuthethelelwa nokubonga.
Uma unomuzwa wokuthi ikusasa umthwalo wakho ifindo karmic, thatha isikhathi sakho kumelwe azibheke onamandla wokuba isehluleki. Cabanga ukuthi isimo singase sibonakale kukubi ngokuya ukuphila ezilinganiselwe.
Akekho owaziyo abakwenze incarnations esidlule futhi yini azoyenza esikhathini esizayo.
Inkinga ezimbi kakhulu kubantu abaphila, namandla kakhulu futhi bahlakanipha uba ngenxa yalokho.
Mhlawumbe ukuhlolwa ukuthi manje nani, kuyisinyathelo ezidingekayo ukuze kufezekiswe izifiso imfihlo kakhulu.
Indlela ususe isiqalekiso ngokwabo. Indlela ususe isiqalekiso umndeni
Kuyini igama Galina? Qamba Galina - okusho imvelaphi. igama Isici Galina
Mesotherapy kusiza ukwenza intsha. Izibuyekezo iziguli